shaqooyinka Beeraha | khayraadka Shaqada iyo mustaqbalkiisa ka USAHello | USAHello
Baro beeraha iyo duwan noocyada kala duwan ee shaqooyinka beeraha. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto beeraha. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
edeb Image of Fish US & Adeegga duur-joogta
Shaqooyinka Beeraha waxaa ka mid ah dhammaan noocyada kala duwan ee shaqada beeraha. shaqaalaha Farm koraan dalagga, kor u xayawaanka, oo u soo jeesan soo saarka beeraha cuntada. Qaxootiga, waddanka u soo guurey, iyo muhaajiriinta oo dhan kaa caawin in ay soo saaraan cunto qaranka.
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay asal beeraha ah oo doonaya in ay ka shaqeeyaan beeraha ah. Waxaa laga yaabaa in aad jeclaan lahayd si ay u tababaraan in mustaqbalkiisa beeraha ah. Read ku saabsan noocyada kala duwan ee shaqooyinka beeraha iyo sida si aad u bilowdo.
Taas oo shaqada beeraha?
beeralay Small - beeraha yar badan oo ay soo saaraan raashinka organic ama takhasuska. Laga bilaabo beer adiga kuu gaar ah ee Maraykanka u baahan yahay shaqo badan iyo maal-gashiga.
shaqaalaha Farm - shaqaalaha beeraha beeraha waaweyn shaqeeyaan labada xoolo ama dalagga.
Packer hilibka - shaqo gawraca xoolaha iyo xirxiraan hilib jawi warshad-sida a. U badan tahay in ay bixiyaan caymis caafimaad oo badan oo shaqooyin kale beeraha. dhirta hilib-xirxiraan badan oo shaqaaleeyaan qaxootiga.
shaqaale xilliyeed - Shaqaale xilliyeedka inta badan waa muhaajiriinta kuwaas oo socdaalo United soo socda goosashada dalagga iyo xilliyo beerto. Waxay guran, warshad, weed, biyaha, alaabahooda iyo shuban midhahaas. Inta badan shaqaalaha xilliyeed waa sharci deggenaasho iyo xaaladda shaqada waa masaakiin.
mashaariicda Inner-magaalada - waxaa jira fursado badan oo iskaa wax u qabso iyo qaar ka mid ah jagooyinka bixisay beeraha magaalada iyo beeraha bulshada.
operator mishiino Farm - wadayaasha qalab badan oo ku saabsan beeraha u baahan yihiin tababar dheeraad ah iyo shahaado, laakiin waxay yihiin in baahida loo qabo iyo inta badan si fiican u bixisay badan shaqaalaha kale ee beeraha.
kormeeraha Dowladda - kormeerayaasha ee beeraha loo hubiyo in dalagga cuntada iyo xoolaha oo si haboon loo sara kiciyey oo raac caafimaadka, nabadgelyada iyo deegaanka xeerarka.
Tababaraha Farm ama horjoogaha beeraha - maamulayaasha kormeero, shaqaalayaashuse waa beer, shaqaalaha gaar ahaan soo galootiga ah kuwaas oo u safri ka beer beerta.
Beyíaadda - shaqooyinka dhinaca ganacsiga beeraha ah, ay ka mid yihiin iibka iyo warshadaha taageero kale, waxaa sii kordhaya. Shaqooyinka waxay bixiyaan jagooyinka maamulka more.
Seynisyahanno - sayniska beeraha waxa ka mid ah sayniska ciida iyo dhirta genetics.
Ma shaqooyinka beeraha xaq ii?
Beeraha waa shaqada jirka adag. shaqaalaha Farm iyo dadka xoolaha ka shaqeeya waxay u baahan yihiin in ay xoog. Shaqooyin badan ayaa sidoo kale u isticmaali beeraha mishiino, sidaa darteed waa shaqo wanaagsan oo qof si fiican u shaqeeya mishiinada. Haddii aad rabto in aad meel ka baxsan shaqeeyaan, shaqooyinka beeraha ayaa kugu habboon,. Laakiin shaqada beeraha waa khatar, oo aad u baahan tahay in laga digtoonaado agagaarka mashiinada, kiimikada iyo xayawaanka. Haddii aad tahay awoodaan in ay qaataan on waajibaadka, ka dibna isagoo tababare beer ama kormeeraha waxa laga yaabaa in uu gaaro qallal ay kuu fiican. Isagoo ka hadlayay laba luuqadood waa hanti weyn tababare ka mid ah shaqaalaha beeraha.
Shaqooyinka Beeraha waa qayb weyn oo ka mid ah dhaqaalaha ee California, Texas, iyo qaar ka mid ah dalalka badhtamaha galbeedka iyo koonfurta. caanaha The, miro, khudradda iyo hilibka warshadaha had iyo jeer u baahan tahay shaqaalaha beeraha. Iyagu ma ay badanaa weydiiso waayo-aragnimo ama waxbarashada dugsiga sare. Tababaraha beeralay ama beerta aad tababari doonaan. Laakiin shaqooyin kuwaas oo aan si fiican u bixisay. Sida laga soo xigtay US Department of Agriculture, in ka badan kala bar dhamaan shaqaalaha beeraha sharci.
shaqooyinka kale ee beeraha u baahan karaan waxbarasho iyo tababar qaar ka mid ah. shaqooyinka Dowladda, sida kormeeraha beeraha, u baahan tahay jinsiyadda. If you want to prepare for citizenship, waxaad qaadan kartaa fasalka dhalashada online lacag la'aan ah.
Raadi fasalada beeraha kuu dhow
Kuleejooyinka bulshada meelaha badan oo beeraha bixiya fasalo beeraha. Waxay bixiyaan degrees associate labo sanno ee. Waxaad ka heli kartaa shahaadada associate ah ee sayniska xoolaha, sayniska beeraha ama biology. Si aad u shaqeeyaan asbaabahu, ama haddii aad rabto si ay u bilaabaan ganacsi beereed ah, Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay xirfado ganacsi. Waxaa jira koorsooyin badan oo ganacsi ee kulliyadaha bulshada. Raadi college beesha kuu dhow.
Waxaad qaadan kartaa qaar ka mid ah koorsooyin online Barnaamijka University Cornell Small beeraha ama daawato videos ammaanka ka xoreeyo. Beeraha Ammaanka iyo Xarumaha Caafimaadka.
barnaamijyada beeraha Mareykanka cusub
qaxootiga iyo doolka badan ayaa u yimid inuu America aqoonta beeraha. Guud ahaan USA, waxaad ka heli kartaa barnaamijyo taageero, tababar ama shaqo siiyaan beeralayda qaxootiga. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Georgia: Beeralayda Global
Hawaii: Kunia Beeraha Kobcinta
Illinois: Barnaamijka Tababarka Refugee Garden Global
Maine: Mashruuca The New American Sustainable Beeraha (NASAP)
New York: Syracuse Partnership Beeraha Refugee
Massachusetts: New Entry Project beeraha Sustainable
Missouri: International Institute Global iyo beeraha □
Tennessee: Si wada jir ah u koraya
Texas: Plant u soo gudbiyo
Daawo video ah oo ku saabsan barnaamijka beeraha qaxootiga ah ee Vermont
Haddii aad leedahay shahaado ama shahaado ka timid waddan kale, Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo dadka haysta fiisada guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Raadi online: Aghires waa website ah in lagu qoraa shaqooyinka beeraha.
diirada:Kulan Morris dhareer, Milkiilaha of World dalagyada Farm ee New Jersey
In 2002, Morris Gbolo u guuray koonfurta New Jersey qaxootinimo ka Liberia. maanta, uu dib u samaynayaan wixii uu jecel yahay - dalkiisii ​​hooyo ka beerashada dalagyada uu cuntada ugu jeceshahay.
Daawo video ah oo ku saabsan dhareer Morris
ganacsatada Farm wada dhiso ganacsi